Corporate News Archives - KBZ Bank
KBZ Bank: Compliance Policy
စာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်း (နိုင်ငံခြားသုံးငွေ)
Explore MPU E-commerce
Shopper Installment Loan
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေရသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအား ပံ့ပိုးကူညီမှုအစီအစဉ်
SME JICA Two Step Emergency Loan အစီအစဉ်
Onshore Security Agent Services
KBZ Quick Pay
KBZ MPU Corporate Tax Debit Card
Working at KBZ Bank
Sign In to KBZ iBanking
Sign In to Card Statement
Home / Corporate News
KBZPay မှ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေး အစီအစဉ်များကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် အထူးအလေးပေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေ
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက် – မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူငယ်လူရွယ်များအတွက် ငွေကြေး စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပို့ချပေးနိုင်ရန် KBZPay နှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ၏ စုပေါင်းအင်အားတစ်ရပ် ဖြင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲများစွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၁၀,၀၀၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲများကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါင်း (၂၉) ကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြောပွဲများသည် တက်ရောက်သူများအတွက် မိမိတို့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ငွေကြေးဆိုင်ရာ...
September 13, 2019June 28, 2021 In Corporate News, News MM
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှု အမြန်ဆန်ဆုံး မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် အသုံးပြုသူ အရေအတွက်သန်း (၃၀) အထိ ရှိလာစေရန် ရည်မှန်းထား
နေ့စဉ် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူများကို မိုဘိုင်းဦးစားပေး စီးပွားရေးစနစ်ဆီသို့ ခေါ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ ကမ္ဘောဇဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့် (၆) လခန့် အချိန်တိုအတွင်း အသုံးပြုသူ အရေအတွက် တစ်သန်း ကျော်လွန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ယခု ရက်သတ္တပတ်အတွင်း တစ်သန်းမြောက်သော KBZPay အသုံးပြုသူ အရေအတွက်ကို ကျော်လွန်ခဲ့သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှု အမြန်ဆုံး မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်အဖြစ် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တစ်ခု စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ KBZPay စတင် စမ်းသပ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် လွန်ခဲ့သော ခြောက်လမှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း အင်အား (၁၈,၀၀၀) ရှိ...
August 29, 2019June 28, 2021 In Corporate News, News MM
KBZPay အသုံးပြုသူများ၏ စမတ်ဖုန်းသည် မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်သာမက ATM ကတ်အဖြစ်ပါ အသုံးပြုနိုင်လာ
KBZPay အသုံးပြုသူများ၏ စမတ်ဖုန်းသည် မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်သာမက ATM ကတ်အဖြစ်ပါ အသုံးပြုနိုင်လာ KBZPay သည် အသုံးပြုသူများအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မည်သည့် ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM စက်များတွင်မဆို ငွေသားချက်ချင်း ထုတ်ယူနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည့် မြန်မာ၏ ပထမဦးဆုံး မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် ဖြစ်ပါသည် ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက် – KBZPay အသုံးပြုသူများအတွက်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မည်သည့် ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM စက် ၁,၅၀၀ တွင်မဆိုငွေသားချက်ချင်းထုတ်ယူနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည့် KBZPay မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကို ကမ္ဘောဇဘဏ်က စတင် မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ဘဏ်အကောင့်ရှိမှသာ ATM စက်များမှ ငွေသားထုတ်ယူနိုင် မည်ဆိုသည့် အယူအဆဖောက်ထွက်ပြီး မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ဖြင့်ငွေသားချက်ချင်းထုတ်ယူနိုင်ရန်...
Western Union (Inbound ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်း) အထူးဝန်ဆောင်မှုကို ဘဏ်ခွဲပေါင်း (၅၀)တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ
KBZ Step Up Loan ချေးငွေအမျိုးအစား – မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ
ပထမ ၂ နှစ်အတွင်း အတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရရှိပိုင်ဆိုင်လိုသော အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကူညီပေးမည့် မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ရာချေးငွေဈေးကွက်၏ ပထမဆုံးသော KBZ Step Up ချေးငွေအမျိုးအစားသစ်
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို ညွှန်းပေးပြီး ဆုငွေတွေရယူလိုက်ပါ
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို ညွှန်းပေးပြီး ဆုငွေတွေရယူလိုက်ပါ အစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
No.(615/1), Pyay Road, Kamayut Township, Yangon City, Myanmar.
Call Center for KBZ Bank
Call Center for KBZPAY
KBZ Bank © 2021 / All Right Reserved.